Ny vata fampangatsiahana fantsom-boaloboka manindrona dia ampiasaina indrindra amin'ny fandefasana sakafo tsy misy fisaka, ka mahatonga azy io ho safidy malaza amin'ny indostrian'ny hazan-dranomasina mba hanafoanana haingana ireo fenom-trondro, makamba, angisy ary maro hafa. Izy io dia miaraka amin'ny evaporator tena mahomby sy madio ary mampiasa ny fomba famatsian-drano farany ho an'ny fahombiazan'ny fifanakalozana hafanana izay 20% avo kokoa noho ny fomba nentim-paharazana. Raha ampitahaina amin'ny fomba nentim-paharazana, ny fihenan'ny lanjan-tsakafo dia ampidinina mihoatra ny 1.5%.
● Ny fehikibo dia manisy famolavolana fantsom-panafody manana boribory mijidina mba hanatsarana ny vokatry ny fifanakalozana hafanana.
●Ny vata fampangatsiahana fehin-kibo miaro dia mampiasa tsipika famokarana voatahiry takelaka mangatsiaka nafarana ho an'ny famokarana tontonana, izay miantoka ny fahombiazan'ny angovo avo lenta ary ny fahamendrehana sy ny kalitao miavaka.
●Ny vata fampangatsiahana tunnel dia miaraka amina rafitra fanaraha-maso afovoany manan-tsaina, fitaovana hita maso mandeha ho azy ary jiro fampitandremana, izay mora ho an'ny mpampiasa ny miasa sy mitazona azy ireo.
Tunnel fehikibo fampidinana CW1015 / 18 CW1415 / 18 CW1615 / 18 CW1815 / 18 CW2015 / 18 CW2215 / 18 CW2415 / 18 CW2615 / 18
Sakany fanakonana W 3200mm / 3500mm
Sakany fehikibo harato Fehikibo fehikibo 1500mm / 1800mm, azo atao 1400mm / 1700mm sakany
Ny haavon'ny fantsona 30~70mm azo ovaina
Herinaratra napetraka 25kw 36kw 41kw 47kw 52kw 58kw 63kw 69kw